Inopindirana Zvemukati, Yevatengi Dhata Unofanirwa Kuteedzera
Chishanu, Mbudzi 6, 2015 Mugovera, January 14, 2017 Muhammad Yasin
Kunyangwe isu tichigona tese, kune chikamu chikuru, kubvuma kuti zvemukati zvekudyidzana hachisi chinhu "chitsva," kufambira mberi mukushambadzira tekinoroji kwakaita kuti zvemukati zvemukati zvive zvinonyanya kubatsira mukushambadzira kwemunhu. Zvizhinji mhando dzezvinhu zvinofambidzana bvumidza mabrand kuti aunganidze huwandu hweruzivo kune vatengi - ruzivo rwunogona kushandiswa kuwana zvirinani kune zvinodiwa nevatengi uye kubatsira nezveramangwana kushambadzira. Chinhu chimwe chete chakashambadzirwa nevashambadzi, zvisinei, kusarudza kuti ndeupi rudzi rweruzivo rwavanoda kuunganidza pamwe nehukama hwavo. Mukupedzisira, inyaya yekupindura uyu mubvunzo wegoridhe: "Ndeapi data evatengi ayo achanyanya kubatsira kune chinangwa chesangano?" Heano mamwe mazano edata revatengi akanyatsonaka kuti utange kuteedzera panguva yako inotevera yekudyidzana zvemukati mekusimudzira:
Kuunganidza mazita mae-mail nenhamba dzerunhare zvingaratidzika sezviri pachena, asi iwe ungashamisika kuti vangani vanhu vasingaite izvi. Kune akati wandei emhando kunze uko anogadzira stellar inowirirana zvemukati zvakangonaka kuitira chinangwa chekuziva chiratidzo; saka kuunganidzwa kwedata kunopedzisira kwatsvairwa pasi pegaga.
Kunyangwe uri mutambo kana unonakidza maitiro ekushandisa, rako mhando rinogona kubatsirika nekuunganidza iro ruzivo. Pasi pemutsara, mhando yako inogona kubata kukwidziridzwa kukuru kwaunoda vatsigiri vezviratidzo (sevaya vakabatana neapp yako) kuti vazive nezvazvo. Uye kwete chete iwe waunoda kuti vazive nezvazvo, asi iwe unoda kuti ivo vashandise chaizvo kusimudzira kana ivo vatenga kuchitoro chako.
Zvino, ini ndinowana zvachose kuti pane dzimwe nguva pazvinenge zvisiri "zvine musoro" kukumbira ruzivo rwekuonana. Ndinoiwana. Asati (kana kunyangwe mushure) kutamba mutambo, hapana munhu anoda kunyatso kugovera ruzivo rwavo. Kunyangwe iwe uchiziva kuti iwe unoshandisa ruzivo rwevatengi rwekuratidzira nenzira isina tsarukano, zviri pamutemo, zvine rukudzo, kuchine vatengi vazhinji vanotya kuti haudi. Neraki, pane chinhu chimwe chete chaunogona kuita icho chave kunyanya kubatsira kune mazhinji emhando dzandakashanda nadzo - uye iri kupa imwe mhando ye kukurudzira mukudzosera ruzivo rwekutanga ruzivo. Mushure mezvose, vanganunura sei chipo chavo kana mubairo kana isu tisingazive ivo?
Zvikurudziro zvinogona kunge zvakakura kana zvidiki sezvo zita rako rinoona rakakodzera. Mushure mekutamba mutambo kana kutora ongororo pfupi (chero yako zvemukati zvinofambidzana zvine, chaizvo), unogona kubvunza kana vangada kupinda-mukati mukana wekuhwina mubairo muhombe kana kupinda-mukati kuti ugamuchire coupon kana chipo . Nomuzvarirwo, poindi yezvose izvi ndeyekuti vanhu vanoda zvemahara zvinhu (kana kuva nemukana wekuhwina zvemahara zvinhu). Vatengi vanozove vanofarira kupa ruzivo rwavo kuitira kuti vataurwe nezve zvavanokurudzira.
Yakasarudzika kuGoogle Analytics, chiitiko chekutevera ndiko kuteedzera kwezviitiko pazvinhu zvinofambidzana zvewebsite yechako. Izvi zviitiko (kana "zviitiko") zvinogona kuve nechero mhando yekudyidzana - zvese kubva pakurova yekutamba / kumbomira bhatani pane vhidhiyo, kusiya fomu, kuendesa fomu, kuzorodza mutambo, kudhawunirodha faira, nezvimwe. Rondedzero inoenderera . Anenge chero api neapi ekudyidzana pane yako brand yekudyidzana midhiya kuverenga se "chiitiko."
Chii chinoita kuti chiitiko chekutevera chibatsire ndechekuti chinopa nzwisiso huru yekuti vashandisi vako vanoshandisa sei webhusaiti yako pamwe nekufarira kwavo zvirimo. Kana chiitiko chekutevera chikaratidza kuti vanhu vari kungorova bhatani rekutamba pamutambo kamwe chete, chingave chiratidzo chekuti mutambo wacho unofinha kana kuti hausi kunetsa zvakakwana. Padivi rerutivi, zviito zvinoverengeka zve "kutamba" zvinogona kuratidza kuti vanhu vanofarira mutambo uri pane yako saiti. Zvimwechetezvo, kusaona zvakakwana "kurodha" zviitiko / zviito zvinogona kuve chiratidzo chakanaka chekuti izvo zvinokanganisika (e-gwara, vhidhiyo, nezvimwewo) hazvinakidze kana kubatsira zvakakwana kurodha pasi. Kana mabrands aine iyi mhando yedata, vanogona kuita shanduko dzakakura kune avo zvemukati, pamwe nehurongwa hwavo hwese hwekutengesa.
Kubatanidza chiitiko chekutevera muwebhusaiti yako kunogona kuve kunonyengera, asi nekutenda, pane akati wandei-ekutungamira kunze uko (kusanganisira iyo imwe paGoogleizvo zvinogona kukubatsira shandisa GA chiitiko chekutevera runako nyore. Kune zvekare kune akati wandei madhairekitori ekuti ungawana sei uye uverenge mishumo kubva kuGA pane zviitiko zvawakateedzera.
Akawanda Sarudzo Mhinduro
Rudzi rwekupedzisira rweruzivo rwevatengi ini ndinokurudzira zvikuru kuteedzera mhinduro-dzakawanda-sarudzo mumibvunzo, ongororo uye vaongorori. Zviripachena, mibvunzo yakawanda-yesarudzo (uye mhinduro) ichasiyana zvakanyanya, asi kune nzira mbiri dzekuteedzera mhinduro-dzakawanda dzinogona kubatsira zita rako! Kune imwe, sekutevera chiitiko, mibvunzo yakawanda yesarudzo nemhinduro zvinopa chiratidzo chako zvirinani izvo vazhinji vevatengi zvavanoda kana kutarisira kubva kwauri. Nekupa vatengi vako sarudzo shoma shoma dzaungasarudze kubva (mukati memibvunzo yako kana ongororo), zvinokutendera kuti ugovane mhinduro imwe neimwe nepesenti; kuitira kuti iwe ugone kuronga vamwe vatengi nemhinduro yavo chaiyo. Semuenzaniso: Kana iwe ukabvunza mubvunzo, "nderipi remavara aya kana raunofarira?" uye iwe unopa mhinduro ina dzinogona kuitika (Dzvuku, Bhuruu, Girinhi, Jena), unogona kuona kuti ndeupi muto unozivikanwa nevanhu vazhinji vanhu vakasarudza imwe mhinduro. Izvi kazhinji hazvigone kuitwa nemafomu-ekuzadza mhinduro.
Chimwe chikonzero chekuteedzera akawanda-sarudzo mhinduro dzinogona kubatsira ndezvekuti mabrand anokwanisa kutsvetera mberi kune vamwe vashandisi vakapa imwe mhinduro (Ex: kudhonza iro runyorwa rwevashandisi vakapindura nerwavanofarira ruvara se "tsvuku"). Iyo inobvumidza mabhenji kutarisisa kwavo kushambadzira kuyedza kune vamwe vashandisi muchikamu icho - kungave kuri kuburikidza nekutengesa e-mail, kunanga tsamba kana kufona. Pamusoro pezvo, iwe unogona kuona kuti vatengi vakapindura nemimwe mhinduro vane zvimwe zvakajairika izvo zvinofanirwa kutendwa. Mimwe mibvunzo mikuru yakasarudzika-yaunogona kubvunza inowanzo tarisa: nguva yekutenga, chaunoda brand, razvino chiratidzo - chero chinhu chingabatsira nechero hurukuro dzeramangwana, chaizvo!
Hazvina mhosva kuti ndechipi chinangwa chekupedzisira chezvinhu zvako zvinofambidzana, kuunganidza dhata pane chero chinhu chekudyidzana kwevatengi kwakakodzera kuedza. Nemakwikwi matsva anomera zuva rega rega, iwe une chikwereti kune chako chiratidzo kuti uzive vatengi vako uye zvavanoda. Kufambira mberi mune tekinoroji hakuna kungoita kuti zvikwanise kuunganidza iyi data, asi zvave kuita kuti zvive nyore kwazvo kuzviita. Nezvese zviwanikwa zviripo kune vatengesi, hapana chikonzero chekutevera zvese!